Gamtaan Awurooppaa hookkara Yunivarsitiilee hedduu keessatti mul’ataa jira – jedhuu fi walitti-bu’insawwan naannoolee biyyattii adda adda addaa keesssatti geggeessamaa jiru, keessumaa ka bifa sab-lammummaa qabataa deeme ilaalchisee yaaddoo jabaa qabaachuu isaa ibsa har’a baaseen beeksisee jira.
Naannoo daangaa Oromiyaa fi bulchiinsa naannoo Somaaliyaa-Itiyoophiyaa walitti-bu’insawwan uumamanii lubbuu namaa hedduu balleessee fi qabeenyaa hedduu barbadeesse – dhimmoota yaaddessoo sana keessaa tokko tahuu ka dubbatu – ibsi Gamtaa Awurooppaa, maatiilee namoonni isaanii jalaa ajjeefamaniif gadda isaa ibsee jira.
Gaaffiilee fi mormii uummataa karaa nagaa furuudhaaf, malli tokkichi, marii siyaasaa qaamawwan mara hirmaachise geggeessuu akka tahe ejjennoo keenya itti fufnee hubachiisna – jedha – Ibsi Gamtaa Awurooppaa kun.
Gochaalee hookkaraa geggeessaman mara irratti qorannaa walaba tahe geggeessuun barbaachisaa tahuu hubachiisee, muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa – Hayilemaariyaam Dessaalenyi, mootummaan isaanii kan ajjeechaalee dhiheenya geggeessaman qoratu gurmuu qorattootaa dhaabuu isaa beeksisuun isaanii tarkaafii baay’ee gaarii akka tahe dubbata.
Humnoota poolsii federaalaa fi ka bulchiisota naannoo lameenii dabalee, akka gochaa nageenya lammiwwan maraa miidhu irraa of qusatanii fi nageenya isaanii mirkaneessan gaafata – Gamtaan Awurooppaa.
Dhimmoota wal-mormsiisoo tahan karaa nagaa furuuf, malawwan itti wal-dhibdee furan kan heera biyyattii keessattii keessatti tumamanii jiran akka hatattamaan hojii irra oolfamanis gaafatee jira.